I-China Tattoo Height Adjustable Height Black Arm Rest Stand Ukukhiqiza nefektri | MOLONG
Ikhwalithi ephezulu yesikhumba sokuphumula.
Ingaguquguquka kusuka kumaphoyinti ahlukene ama-3.
Kulula ukuphatha - Ephathekayo
Kufanela ikesi yesudi!
Intengo enengqondo - Ukuncintisana
Luhlala Isikhathi Eside & Permanent & Esitebeleni
Ukukhetha okuhle kweTattoo Studio
Lesi sihlalo esikhiphekayo esikhokhelwayo se-tattoo singalungiswa ngaphandle kokususa noma yiziphi izingxenye.
Iphedi yesifuba igcwele ngokuphelele ukuthola induduzo enkulu kwabesilisa nabesifazane.
Isihlalo, i-armrest, isifuba sephedi ne-headrest kuyashintsha ngokuphelele.
Uhlobo lwento: I-Tattoo Armrest
Okubalulekile: Isikhumba se-Metal + Faux
Usayizi Omnyama wePad: Okungenani. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 intshi
Ukuphakama Okuguqukayo: Okungenayo. I-83-136 cm / 31.5-52.8 intshi
Usizo lwabenza imisenenzi tattoo izesekeli armrest
Ungaguqula ukuphakama ne-armrest ezindaweni ezahlukahlukene ezahlukahlukene.
Idizayini ye-ergonomic ikuvumela ukuthi uyilungise kunoma iyiphi i-angle ukuze ihambisane nanoma yimuphi umsebenzi we-tattoo.
Cindezela inkinobho bese uyijikisa emuva naphambili uye ekhoneni lakho olifunayo. Uma kungenjalo i-pivot noma i-angle itshekela phambili noma emuva kuphela
Le armrest kulula ukuyiphatha ekuhambeni kanye nasemibukisweni ye-tattoo.
Iphuka ibe yizicucu ezi-3 nesisindo esilula nenqwaba encane
Le armrest nayo iqinile futhi kulula ukuyihlanza.
Umsebenzi olungiswa ngokuphelele futhi osindayo
- Iphedi ethambile nenethezekile yezingalo, imilenze noma izinyawo zokuphumula.
- Idizayini ye-Ergonomic ikuvumela ukuthi uyilungise kunoma iyiphi i-angle (ngaphezu kwe-180 degree) ukuhambisana nanoma yimuphi umsebenzi we-tattoo.
- Ukuphakama okulungisekayo kwezidingo ezihlukile.
- Iphedi ethambile futhi ethokomele yezingalo, imilenze noma izinyawo zokuphumula, okwandisa ukunethezeka kweklayenti.
- Izitendi ezinyaweni ezintathu zinikeza ukuzinza nokungaxegi (Imilenze yensimbi eneziphetho zenjoloba)
- Iyaphatheka futhi iyagoqeka, kulula ukuyigcina noma ukuyiphatha.
【Ochwepheshe rest Ukuphumula kwengalo yobungcweti ne-cushion yokuphumula emlenzeni, iphedi elithambile futhi elijiyile kukunikeza induduzo ngezingalo, imilenze nezinyawo zokuphumula, kwenza i-tattoo yakho isebenze kalula.
Ukuphakama okulungisekayo】 Ukuphakama kungashintshwa kusuka ku-65cm kuye ku-125cm ukulingana izidingo zakho ezihlukile, kukunikeza wena namakhasimende akho umuzwa omuhle. Amandla wokuthwala anamandla, isitendi se-armrest singanikeza ukuxhaswa okwanele kubantu abanesisindo esihlukile
【Kutholakale】 Lokhu kuphumula kwengalo ye-tattoo kuyatholakala, kulula ukugcinwa nokuthwalwa, ukugcinela indawo yokugcina lapho ungasidingi isitendi sezintathu. Iphedi likuvumela ukuthi ulungise ngaphezu kwe-180 degree angle kunoma yimuphi umsebenzi we-tattoo.
Legs I-Anti-Skid legs Imilenze yensimbi engama-tripod eneziphetho zenjoloba inikezela ukuqina kokuzidweba, i-Anti-skid ngaphandle kokunwaya phansi, iyasebenza futhi ihlala isikhathi eside. Umkhiqizo ofanele we-tattoo salon noma umculi we-tattoo.
Insizakalo ye-One-On-One】 Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nezinto zethu, sicela uxhumane nathi nge-imeyili. Siyajabula ukukusiza ukuxazulula inkinga. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okungajwayelekile yilokho esikwenzayo!
Langaphambilini Umshini weKingKong 3 weTattoo Cartridge
Olandelayo: I-cartridge grip grip (25pcs / ibhokisi)
Ukuphakama Ashintshekayo Engagqwali Tattoo Ingalo Re ...